Kubvisa Pamuviri—Zvinotaura Bhaibheri
Mukadzi akachenjera anoteerera hana yake
Gore negore, vakadzi vakawanda vari kubvisa pamuviri, zvichibva zvaita kuti vana vanopfuura 50 miriyoni vafe vasati vaberekwa. Nhamba yevana ivavo vari kufa inotopfuura uwandu hwevagari vemunyika dzakawanda.
Kwakaipa here kana kuti munhu anozvisarudzira?
Vakadzi vanobvisa pamuviri pamusana pezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvakadai sekuoma kweupenyu, kusawirirana neakamupa pamuviri, kuda kuenderera mberi nedzidzo kana kuti nebasa, kana kuti kusada kurera mwana asina baba. Asi vamwewo vanoti kubvisa pamuviri kwakaipa nekuti kusaremekedza chipo chekubereka chakapiwa vanhukadzi naMwari.
Kuna Mwari, upenyu chinhu chitsvene, kunyanya hwevanhu. (Genesisi 9:6; Pisarema 36:9) Izvi zvinorevawo kunyange hwekamwana kanenge kasati kaberekwa. Mudumbu makanenge kari makanyatsogadzirwa naMwari kuti kakure zvakanaka. Munyori wePisarema akati: “Makaramba makandivharidzira mudumbu raamai vangu.” Akazotizve: “Maziso enyu akaona muviri wangu uchangobva kuumbwa, uye nhengo dzawo dzose dzakanga dzakanyorwa mubhuku renyu, kuti mazuva api adzakaumbwa.”—Pisarema 139:13, 16.
Mutemo wakapiwa vaIsraeri naMwari uye hana yaakatipa zvinotibatsira kuziva maonero aanoita upenyu hwemwana anenge achiri mudumbu. Mutemo wacho waiti kana munhu akakuvadza mukadzi ane pamuviri, mwana wacho obva afa, munhu iyeye aifanira kuurayiwawo. (Eksodho 21:22, 23) Asi vatongi vaitanga vaongorora kuti zvaitika nemaune here kana kuti netsaona.—Numeri 35:22-24, 31.
Vanhu vakapiwa hana inovaudza kuti ichi chakanaka here kana kuti chakaipa. Kana mukadzi akateerera hana yake orega kuuraya mwana wake ari mudumbu, hana yake haimutongesi. * Asi kana akaita zvinopesana nehana yake, zvinoita kuti azopedzisira ava kuzvitongesa. (VaRoma 2:14, 15) Dzimwe ongororo dzinoratidza kuti vakadzi vakabvisa pamuviri vane mukana wakakura wekubatwa nechirwere chedepression.
Ko kana munhu achiona sekuti kurera mwana wacho kuchazomuomera, kunyanya kana pamuviri pacho pakanga pasina kurongwa? Bhaibheri rinopa vimbiso iyi kune vaya vanoita zvinoenderana nemitemo yaMwari: “[Mwari] muchava akavimbika kune akavimbika; hamuzowaniriwo mhosva murume [kana mukadzi] asina mhosva.” (Pisarema 18:25) Rinotiwo zvekare: “Jehovha anoda kururamisira, haazosiyi vakavimbika vake.”—Pisarema 37:28.
‘Hana yavo inopupurirana navo uye pane zvavanofunga, vari kupiwa mhosva kana kuti kunyange kupembedzwa.’—VaRoma 2:15.
Ko kana wakambobvisa pamuviri?
Ruth haana kuroorwa uye akati: “Ndakanga ndatova nevana 3, saka kuzochengeta 4 kwaizondiomera. Ndakabva ndabvisa pamuviri, uye ndakasara ndichingozvitongesa.” * Mwari anogona kumukanganwira here?
Jesu Kristu akaratidza maonero aMwari paakataura kuti: “Handina kuuya kuzoshevedza vanhu vakarurama, asi vatadzi kuti vatendeuke.” (Ruka 5:32) Saka kana tikanyatsozvidemba nekuda kwezvakaipa zvatakaita uye topfidza, tokumbira Mwari kuti atiregerere, achatiregerera, kunyange kana takaita zvivi zvakakura. (Isaya 1:18) “Haiwa Mwari, hamuzozvidzi mwoyo wakaputsika nowakapwanyika,” inodaro Pisarema 51:17.
Kana munhu akanyengetera achizvininipisa, Mwari anoita kuti ave nehana yakachena uye anogadzikana mupfungwa. “Kukumbira kwenyu ngakuziviswe Mwari nokunyengetera nokuteterera pamwe chete nokuonga; uye rugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose rucharinda mwoyo yenyu nesimba renyu rokufunga,” inodaro VaFiripi 4:6, 7. * Ruth paakadzidza Bhaibheri uye paakadurura mwoyo wake kuna Mwari, zvakaita kuti avezve nerugare rwemupfungwa. Akaona kuti Mwari ‘anokanganwira zvechokwadi.’—Pisarema 130:4.
“[Mwari] haana kumbotiitira maererano nezvivi zvedu; uyewo haana kutiitira zvatakafanirwa nazvo maererano nokukanganisa kwedu.”—Pisarema 103:10.
^ ndima 8 Kana zvikafungidzirwa kuti utano hwaamai kana kuti hwemwana hunogona kukanganisika, ichocho hachinganzi chikonzero chingaita kuti vabvise pamuviri. Panguva yekusununguka, kana zvikaonekwa kuti pari kufanira kusarudzwa kuti ndiani orarama, amai kana kuti mwana; murume nemudzimai ndivo vanofanira kusarudza. Asi izvi hazviwanzoitiki munyika dzakawanda dzakabudirira, nekuti dzafambira mberi panyaya dzekurapa.
^ ndima 12 Zita rakachinjwa.
^ ndima 14 Tariro yekumutswa kwevakafa inogona kuitawo kuti munhu ave nerugare rwemupfungwa. Verenga nyaya inoti “Pane tariro here yokuti kana mwana achiri mudumbu akafa achazomutswa?” iri muNharireyomurindi yaApril 15, 2009, pachikamu chakanzi “Mibvunzo Inobva Kuvaverengi”
Zvinotaura Bhaibheri Nezvekubvisa Pamuviri
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku MUKAI! Nhamba 1 2017 | Kubatsira Vechidiki Vane Chirwere cheDepression